Get Involved Archives - SarcoidosisUK
လူနာပြန်ကြားရေးလက်ကမ်းစာစောင်များ - အမိန့် Form ကို
ရှငျဘုရငျ၏ Sarcoidosis မေးခွန်းလွှာ
လူနာ Registry ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ 20th နှစ်မြောက်သုတေသနကင်ပိန်း
SarcoidosisUK များအတွက် Fundraise
SarcoidosisUK ERJ ပွင့်လင်းသုတေသနအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဆောင်းပါးကိုအထောက်အကူပြုရန်
အားဖြင့် SarcoidosisUK | ဒီဇင်ဘာ 28, 2018 | အားလုံးရေးသားချက်များ, အသိအမြင်, ပါဝင် Get, သတင်းအချက်အလက်, သုတေသန, Sarcoidosis သတင်းများ, SarcoidosisUK, ဝက်ဘ်ဆိုက်
'' Sarcoidosis: လူနာကုသမှုဦးစားပေး '- ပွင့်လင်းသုတေသနဥရောပအသက်ရှုလမ်းကြောင်းဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ။ ဂျက် Richardson က SarcoidosisUK အကြီးတန်းအမှုဆောင်, ဥရောပအဆုတ်ဖောင်ဒေးရှင်း (elf) လူနာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် ...
နှလုံး Sarcoidosis လူနာ? ကျွန်ုပ်တို့၏နယူး Support Group မှ join
အားဖြင့် SarcoidosisUK | ဒီဇင်ဘာ 11, 2018 | အားလုံးရေးသားချက်များ, အသိအမြင်, ပါဝင် Get, သတင်းအချက်အလက်, SarcoidosisUK, ထောက်ပံ့, ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့များ, ဝက်ဘ်ဆိုက်
SarcoidosisUK sarcoidosis လူနာမကြာခဏသူတို့ရဲ့ရှားပါးအခြေအနေနှင့်အတူအလွန်အထီးကျန်ခံစားရကြောင်းကိုငါသိ၏။ နှလုံး sarcoidosis (CS) ပင်အလွန်ရှားပါးတဲ့သည်နှင့်လုံးဝပျောက်နှင့်ရှုပ်ထွေး feeling လူနာစွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်။ အသစ် SarcoidosisUK နှလုံး Sarcoidosis Facebook မှာ Group မှရည်ရွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ...
Sarcoidosis Associated အဆုတ်သွေးတိုးသုတေသနအခွင့်အလမ်း
အားဖြင့် SarcoidosisUK | ဒီဇင်ဘာ 6, 2018 | အားလုံးရေးသားချက်များ, ပါဝင် Get, သတင်းအချက်အလက်, သုတေသန, SarcoidosisUK, ဝက်ဘ်ဆိုက်
Paid သုတေသနအခွင့်အလမ်း cello ကျန်းမာရေးဝိပဿနာ, လွတ်လပ်သောစျေးကွက်သုတေသနကုမ္ပဏီ, sarcodosis ဆက်စပ်အဆုတ်သွေးတိုးရောဂါ (SAPH) လူနာနှင့်အတူစကားပြောဆိုရန်ရှာဖွေနေသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာလူနာရဲ့သဘောထားအမြင်နှင့်မျှော်လင့်ချက်များများ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ...
အားဖြင့် SarcoidosisUK | အောက်တိုဘာလ 31, 2018 | အားလုံးရေးသားချက်များ, အသိအမြင်, ဖြစ်ရပ်များ, ပါဝင် Get, SarcoidosisUK, ဆိုင်, Uncategorized
ခရစ္စမတ်ကတ် Pack ဟာ SarcoidosisUK ခရစ်စမတ်ကဒ်ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲအနိုင်ရသူ Lesley Cochrane ဖို့ SarcoidosisUK ဆိုင်ဂုဏ်ယူပါတယ်အပေါ် Now ကိုရရှိနိုင် Are! ယခုကြှနျုပျတို့မှရရှိနိုင်သည့် bespoke ခရစ္စမတ်ကတ်သို့ Lesley ရဲ့အနိုင်ရဒီဇိုင်းကိုလှည့်ကြပါပြီ ...
အားဖြင့် SarcoidosisUK | အောက်တိုဘာလ 9, 2018 | အားလုံးရေးသားချက်များ, ဖြစ်ရပ်များ, ပါဝင် Get, SarcoidosisUK, Uncategorized
SarcoidosisUK ခရစ္စမတ်ကတ်ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲရဲ့ start ကြေညာဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေပါသည်! ပါဝင်ပတ်သက် Get နှင့်ပွဲလမ်းသဘင် SarcoidosisUK ခရစ်စမတ်ကဒ်ဒီဇိုင်း။ အဆိုပါအနိုင်ရဒီဇိုင်းပညာရှင်ပီသစွာအဆိုပါ SarcoidosisUK ဆိုင်ပေါ် လုပ်. ရောင်းချခဲ့လိမ့်မည်! ငါတို့သည်သင်တို့၏ကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ် ...
Myanmar English Chinese (China) Arabic Bengali German Danish Greek Spanish (Mexico) Spanish (Spain) Finnish French Hindi Croatian Indonesian Hebrew Icelandic Japanese Korean Malay Nepali Dutch Portuguese (Brazil) Norwegian Punjabi Polish Portuguese (Portugal) Tamil Romanian Russian Swedish Thai Slovenian Turkish Chinese (Hong Kong) Vietnamese Italian Urdu Welsh Estonian Marathi Hungarian Persian Gujarati Lithuanian Telugu Latvian Malayalam Bulgarian Czech Slovak Pashto Ukrainian
© SarcoidosisUK 2018 | 020 3389 7221 | ဒါနအရေအတွက်: 1063986 | ယခင်ကသိလ (Sarcoidosis နှင့် Interstitial အဆုတ်အစည်းအရုံး)
ကျနော်တို့သင်တို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးကြောင်းသေချာစေရန် cookies များကိုအသုံးပြုပါ။ ဆက်လက်သို့မဟုတ် cookies တွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန် '' ဆက်ဖတ်ရန် 'ရန်' အိုကေ '' ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။အဆင်ပြေလားဆက်ဖတ်ရန်